अष्ट्रेलियामा रबि ओडले सालको पातको टपरी गीतबारे संगितकार बसन्त थापालाई रबी ओडको यस्तो जवाफ दिए ! – सुदूरखबर डटकम
अष्ट्रेलियामा रबि ओडले सालको पातको टपरी गीतबारे संगितकार बसन्त थापालाई रबी ओडको यस्तो जवाफ दिए !
सामाजिक सञ्जालमा फेरि नेपाल आइडल रवि ओड चर्चाको शिखरमा पुगेका छन् । उनी ‘सालको पात टपरी’ हुने बोलको गीतका कारण चर्चाको शिखरमा पुगेका हुन् । रविले अष्ट्रेलियाको एक कार्यक्रममा दर्शकको अनुरोधमा यो गीत गाउँदा केही तलमाथि भएको भन्दै उनीप्रति उक्त गीतका संगीतकार बसन्त थापाले आपत्ति जनाएका छन् । आपत्ति जनाएपछि रविले त्यसबारे आज स्पष्ट जवाफ दिएका छन् । संगीतकार थापाले आफ्नो गीत सर्जकसँग अनुमति नलिई गाएको, गाउनुअघि क्रेडिट नदिएको तथा शब्दहरु नै तोडमोड गरेर गाएको भन्दै दुःख प्रकट गरेका थिए ।
नमस्ते सबै महानुभावहरुमा
सधैं भन्ने गर्छु म शिकारु हुँ । सिक्ने क्रममा छु । म भुईबाट नै पलाएको हुँ । मेरो धरातल र पृष्ठभूमि कहिले भुल्दिन र भूल्ने छैन, नेपाली सांगीतिक आकाशमा, आदरणीय सर्जक र अग्रजहरुको त्याग तपस्या र समर्पणले गर्दा नै आज नेपाली संगीतले यतिको उचाई लिएको छ । जहाँ हामी रम्न सिक्न पाएका छौं, संगीतलाई निरन्तरता दिन पाएका छौं । यस्ता अग्रज श्रष्टाहरुको अपमान त के, म त्यसको कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दिन ।
दर्शकस्रोता शुभचिन्तकहरुको अपार माया हौसला र साथले मैले नेपाल आइडल जितेको हुँ । त्यसको अर्थ यो होइन मेरो प्वाँख पलाएर आकाशमा उडी आफ्नो पृष्ठभूमि नै भूलेको । तिनै मलाई जिताउने आइडल बनाउने आदरणीय दर्शकस्रोता शुभचिन्तकको माया हौसला र खुशियाली बाँड्न अहिले म उहाँहरुको साथमा रम्न यात्रामा छु । आफू कुनै स्थापित कलाकार भै नसकेको र आफ्नै गीत नगन्य भएकोले मैले अर्थात् हामीले गाउने रम्ने भनेको आदरणीय सर्जकहरुकै गीत संगीत हो ।
दर्शकस्रोता माझ प्रस्तुत गरिरहँदा कोही बेला यस्तो माग वा परिस्थिती आउँदो रहेछ जहाँ आफूले तयार नगरेको वा पूरा नआउने गीतलार्इ गुनगुनाइ दिनुपर्ने अनुरोध आउछ । ‘सालको पातको टपरी’मा पनि मलाई यस्तै बाध्यता आई लागेको हो । अहिले जनजनको मुखमा झुन्डिएको यो गीतको फर्माइस दर्शकहरुमाझबाट आयो । मैले यो गीत पुरा र राम्ररी आउँदैन भन्दा पनि दर्शकहरुको अपार मागको अघि मैले जे जति आउँछ गाउने पर्ने बाध्यता आइलाग्यो र शुरुमै मैले आग्रह गरेको थिए कि यदि त्रुटी गल्ति भएमा क्षमा प्रार्थी हुनेछु ।
अहिलेको सर्वाधिक दर्शकबाट रुचाइएको लोकप्रिय गीत ‘सालको पातको टपरी’ लार्इ बंग्याउने होच्याउने वा अपमान गर्ने मेरो कुनै ध्येय होइन, सबैको मुखमा झुन्डिएको गीतलाई अचानक स्रोतादर्शकबाट माग भै आउँदा, श्रद्धापूर्वक गाउने प्रयास मात्र गरेको हुँ । त्यसैले यस सिर्जनासँग सम्बन्धित सबैलाई मेरो हार्दिक सम्मान रहेको जानकारी गराउदछु । अनि आदरणीय सर्जकज्यूहरुबाट सधैं माया हौसला प्रदान गर्ने र बाटो देखाउने कार्य भै रहने छ । हामी जस्ता संगीतका बिद्यार्थीहरुले सिक्ने अघि बढ्ने अवसर प्राप्त हुनेमा आशाबादी छु ।
अन्त्यमा मेरा तमाम आदरणीय दर्शकस्रोता शुभचिन्तकहरुलाई यहाँहरुको माया साथ सद्भाव र हौसलाको लागि अन्तरहृदयदेखि सम्मान गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । केही उठेका बिषयमा सम्मानपूर्वक आफ्नो भावना राख्न पाइन्छ, गालि गलौच र अपशब्दहरुले कतै स्थान नपाओस । धैर्यधारण र संयमताको लागि अनुरोध गर्दै, यहाँहरुको माया हौसला साथ सहयोगको सधै अनुरागी रहनेछु, धन्यबाद ।